विप्लवमा जिम्मेवारी हेरफेर, नयाँ सैन्य भर्नाको तयारी ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > विप्लवमा जिम्मेवारी हेरफेर, नयाँ सैन्य भर्नाको तयारी !
विप्लवमा जिम्मेवारी हेरफेर, नयाँ सैन्य भर्नाको तयारी !
June 7, 2019 June 7, 2019 GRISHI582
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना कमाण्ड र ब्युरो नेतृत्व फेरबदल गरेको छ ।स्रोतका अनुसार महासचिव विप्लवले हेडक्वार्टरको प्रत्यक्ष निगरानीमा मध्यकमाण्डलाई राखेका छन्। त्यसको जिम्मेवारी खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ दिइएको छ ।
पूर्वी कमाण्डमा रहेका अनिल शर्मा बिरहीलाई प्रकाशनको जिम्मेबारी दिँदै कमाण्डको नेतृत्व ‘विषम’ लाई दिइएको छ। पार्टीको पूर्वी कमाण्डको मुख्यालय समेत तोकिएको छ। पूर्वी कमाण्डका लागि ‘बिषम’सहित ‘शिलु’ जिम्मेवारी तोकिएको छ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टीको यसअघिको जिम्मेवारी:
प्रकाशन, प्रसारण तथा सम्बन्ध बिस्तारसहित रातोखबर पत्रिका र अनलाइनलाइ अझै प्रभावकारी बनाउने जिम्मेबारी ‘बिरही’ र ‘मुकुन्द’टोलीलाई दिइएको छ। मध्य तथा सुदुपश्चिम कमाण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय ‘कञ्चन’लाई यथावत राखिएको छ।
प्रहरीले महत्वपूर्ण जिम्मेबारीमा रहेका हेमन्तप्रकाश ओली, भरत बम, बन्धु चन्द र विजय श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ। हाल उनीहरु थुनामा छन्। यधपी यि सबै बारेमा नेकपाको कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।